Waa maxay xigta ee Cimilada & Tamarta Midwest
Bannaanka 2017, Barnaamijka McKnight ee barnaamijka Midwest Climate & Energy wuxuu qabsadey istaraatijiyad dib u habeyn ah koritaanka weyn suuqyada tamarta nadiifka ah ee waddanka oo dhan iyo xisaabta jawiga cimilada.
Sida gobolka ugu weyn ee gaaska hawada soo saara ee dalka, Sare ee Midwest waa inuu sameeyaa qaybtiisa si loo dardargeliyo dhimista qiiqa kulaylka-hawada u sii galaya hawada. Sida aasaaska u ah, waxaan aaminsanahay in tabaruca ay leedahay door muhiim ah oo ay ka ciyaaraan siinta bixinta dabagalka dabciyada wanaagsan ee xoogga saareysa xalka iyo taakuleynta ka qaybqaadashada dadweynaha meelaha ay ka dhaceen guuldarada suuqa.
Falanqaynta Cilmi-baarista Qaranka iyo Caalamiga
Xaqiiqada cabsida leh ee isbeddelka cimilada - iyada oo hanjabaadkeeda ku aaddan caafimaadka, amniga, iyo dhaqaalaha maxaliga ah, dawlad-goboleedyada iyo kuwa qaran-waxay aad u badan yihiin kuwo sanadle ah.
Iyadoo ay adagtahay caqabadan sidan, waxaa naloo dhiirrigeliyay in aan aragno qaabab cusub oo abaabulaya iyo ka qaybqaadashada, iyo koritaanka codka dadweynaha ee ganacsiga iyo qaybaha kale ee bulshada. Horumarka cimilada ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya isbeddelka suuqa ee muhiimka ah. Thanks to siyaasad taageero iyo deegaan sharciyeyn, Awoodda dib loo cusboonaysiin karo hadda waa sida raqiis ah, ama ka jaban, shidaal fosil ah, iyo dalabka gawaarida korantada Si dhakhso leh ayuu ugu koray sidii la filayay. Nadiifinta shaqooyinka gudaha Upper Midwest ayaa ku dhowaad shan jeer ka dhakhso badan shaqooyinka guud ee gobolka labadii sano ee la soo dhaafay.
Ka soo jeeda qoraalladii hore ee dib loo eegay oo ay soo saartay Akadamiyadda Qaranka ee Sayniska, iyo sidoo kale warbixinta Aqalka Cad Aqalka Cad ee 2016, Istaraatiijiyadda Qarniga Dhexe ee Mareykanka, barnaamijkeenu wuxuu aqoonsan yahay in si loo haysto celceliska heerkulka dhexdhexaadka ah ee adduunka ee ka hooseeya ama ka hooseeya 2 darajo C loo baahan yahay inaan taageerno dardargelinta xawaaraha hadda ee tamarta nadiifka ah. Uumi-baxyada gaaska ku-meel-gaarka ah ee isku-dhafan ee hoos-u-dhaca ayaa sababaya in qashin-qiiqa la gaaro 2020 iyo hoos u dhac iyo hoos u dhac illaa 2050 waxay u baahan tahay saddex qaybood oo waaweyn oo ficil heer caalami ah: u gudubka nidaamka tamarta-kaarboon-yar; kaarboonka iyadoo la adeegsanayo kaymaha, carrada, iyo CO2 teknoolojiyadda ka saarista; iyo yareynta non-CO2 uumi baxa sida methane iyo nitrous oxide.
Sannadkan, barnaamijkayagu wuxuu u adeegsanayaa qaab-dhismeedka dejinta qotodheer qoto-dheer si loo qaabeeyo deeq-bixintayada, baarista, iyo shirarka.
Sidee shaqada aan u taageerno ku gudajiray Minnesota iyo Upper Midwest miyuu ku dhex jiraa falanqayntan qaran iyo kan caalamiga ah?
Hadafka Barnaamijka Cimilada & Cimilada ee Midwest ayaa isku mid ah: Inay kobciyaan oo taageeraan hoggaanka cimilada iyo tamarta ee gobollada Dhexe, taas oo ka dhigaysa gobolka tusaale model caalami ah iyada oo la yareeynayo tamarta korontada ku xiran ee ka jirta dhammaan qaybaha dhaqaalaha.
Minnesota Solar Challenge / Solarial Solar
Qaab-dhismeedka Nidaamka Dhex-dhexaadinta
Sannadkan, barnaamijkayagu wuxuu isticmaalayaa a sharci-dejinta qotada dheer Qaab dhismeedka qaab-dhismeedkayada, baarista, iyo shirarka. Annaga oo nadiifinayna korantada korantada isla markaana aan u sii xaqiijinayno qaybaha kale ee dhaqaalaha - sida garsoorka — waxaan bilaabi karnaa in aan xaqiijino kala-soocidda warshadaha ballaaran ee dhaqaalaha guud.
Kani waa isbeddel dabiici ah oo ka socda shaqada waaxda awoodda ee aan taageernay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyo sidoo kale isbedel ay inbadan oo ka mid ah deeq-bixiyeyaashayada iyo la-hawlgalayaasha our qaateen. Farqi weyn oo muuqda oo ka soo baxa falanqaynteena hore ayaa ah in qaab dhismeedka qotada dheer uu ubaahanyahay waxyaabaha soosocda: istiraatiijiyad qaabab badan oo isbadal leh oo kusalaysan isbadal kordhinta isbadal kordhinta cabbir waqti dheeri ah oo la qorsheeyo; iyo dabacsanaan weyn si loo soo jiito istaraatiijiyad istiraatiiji ah oo udhaxeysa xallinta Marka la eego in awooda iyo gaadiidku ay weli ahaanayaan ilaha ugu muhiimsan ee qiiqa ee Maraykanka, barnaamijkeenu wuxuu sii wadi doonaa in uu ujeeddooyinkeena waxqabadyada ugu horreyn ka sameeyo qaybahaas. Waxaan si isku mid ah u aqoonsanahay faa'idooyinka cimilada ee meelo kale oo ka mid ah deeqda McKnight ee gobalka Midwest, oo ay ku jiraan dadaalada lagu saameeyo go'aamada isticmaalka dhulka iyo in la yareeyo wasakheynta beeraha gudaha Waddada Mississippi River.
Isbedelka Cimilada iyo Sinnaanta
Marka laga soo tago falanqaynta farsamada, waxaan ka mahadcelineynaa in isbedelka cimilada uu keenayo halista ugu weyn ee dadka saboolka ah iyo kuwa ugu nugul hanjabaad badan taasi waxay sii xumayn kartaa saboolnimada iyo kala duwanaanshaha isir iyo dhaqaale. McKnight cusub Bayaan ku saabsan Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada waa faahfaahin kale oo cusub ee istaraatijiyadayada cusub Sannadkan, waxaanu raadin doonaa la-shaqeeyayaasha iyo la-hawlgalayaasha sida barnaamijkeenu u kala-jiidan karo codka saameynaya codadka iyo in la hubiyo in faa'iidooyinka tamarta nadiifka ahi ay baahsan yihiin.
Lix Darawali oo Isbedel ah
Si loo gaaro hadafkeena, waxaa jira lix darawal oo isbeddel ah in McKnight ee deeq-lacageedka, isku-duubnaanta, iyo saameynta maal-galinta ay raadinayso qaab-dhismeed. Kuwani waa meelaha aan ku hagaajin doonno waxqabadyada deeqaha iyo meesha aan ku cabbiri doonno horumarka saddexda ilaa shan sano ee soo socota. Ku haynta dariiqa 2-degree Celsius waxay u baahan tahay ujeeddooyinkan iyo darawalada kale ee isbedelka siyaasadda, xeerarka, iyo goobaha kale ee go'aan qaadashada ee saameynaya iyo dib-u-hagaajinta dhismayaasha suuqa iyo calaamadaha.
Dadaalinta tamarta: Iyadoo ah xubno asaasi ah oo ku jira nidaamka tamarta, waa muhiim in dhiirrigelinta maaliyadeed ee biyaha, moodooyinka ganacsiga, iyo shuruucda suuqyada oo la jaanqaadaya natiijooyinka 'decarbonization'. McKnight wuxuu taageersan yahay e21 initiative, oo ah nooc qaran oo loogu talagalay ka-qayb-gelinta waaxaha oo ay wada-hoggaamiyo Machadka Great Plains iyo Xarunta Tamarta iyo Deegaanka.
Kororka baahida macaamiisha: Tamarta nadiifka ah iyo teknoolojiyadda waa inay noqdaan kuwo aad u jaban oo ay u heli karaan dad badan. Taageero McKnight Dammaanadda Korontada Minnesota, oo ah isbahaysi dhiirigeliya geynta gaadiidka korontada (EVs). Kooxdu waxay macaamiisha u soo bandhigtaa faa'iidooyinka HAA-ga waxayna ka shaqeeyaan iskaashi si loo kordhiyo kaabayaasha lacagaha.
Horumarka hay'adda: Nooca isbedelka looga baahan yahay in si qoto dheer loo dhimo dhaqaalaha ayaa micnaheedu yahay in dadka iyo hay'adaha masuulka ka ah bixinta iyo nidaaminta adeegyada tamarta ay u baahan yihiin qalabka lagu gaarayo go'aamada la ogsoon yahay. Iyada oo taageero ka timid McKnight, Mashruuca Caawimaadda Sharciga waxay siinaysaa caawimaad farsamo hay'adaha sharci dejinta ee Galbeedka-Dhexe.
Ku guuleysta tamar nadiif ah heer kasta: Si ay Midwest iyo Mareykanka u hormariyaan xalka nadiifka ah ee tamarta xaddiga lagama maarmaanka u ah dhibaatada, farriintayadu waxay u baahan tahay inay si wax ku ool ah ula xiriirto dad badan oo dheeri ah. Iyada oo ay iskaashanayaan wakaalada latalinta hal abuurka maxalliga ah, Seiche, waxaan dooneynaa inaan kor u qaadno sheekooyinka naqshad nadiif ah oo tamarta naga hareereysan ee Greater Minnesota. Waxaanu la kulannay sheekooyin badan, oo ay ku jiraan kuwa deggan dadka reer miyiga ah ee dhisaya ganacsiyada, horumarinta jiilka la qaybiyay, iyo degganaashaha awoodda leh ee dugsiyada, saldhigyada gaaska, iyo turkey waxay ku jiraan tamar nadiif ah oo la awoodi karo.
Cilmi-baaris la sameeyey iyo falanqayn: Gaar ahaan waqtiga isbeddel deg-deg ah, xeer-ilaaliyeyaashu, siyaasad-sameeyeyaasha, iyo dadweynaha waxay u baahan yihiin macluumaad sax ah si ay u gaadhaan go'aamo wargelin ku saabsan nidaamka tamarta. McKnight wuxuu taageersan yahay qaabeynta isugeynta korantada ee Minnesota si loo fahmo kharashka iyo saameynta ku tiirsanaanta ee la kulmayo ujeedooyinka dhaqaale ee gobolka ee dhinacyada yar ee kaarboonka.
Qulqulka caasimadda: Isbeddelka cimiladu waa fursad lagu soo jiidan karo dhaqdhaqaaqa weyn ee maalgashiga yar ee maalgashiga ah ee abuura shaqooyin iyo kor u kaca dhaqaalaha. Halka McKnight's Barnaamijka Maalgelinta Saameynta Foundation wuxuu isticmaalayaa awooddiisa mulkiilaha hantida, macaamilka dhaqaalaha, saamileyda, iyo kaqeybgalaha suuqa si loo horumariyo yoolal nadiif nadiif ah.
Hannaan u Qaabilsan Istaraatejiyadda
Sababtoo ah shaqadani waxay ka dhacdaa aduunka oo sii kordhay, istiraatiijiyadayada la cusbooneysiiyey waxay ku habboontahay xuddunta. Waxaan isticmaalnaa hab wax barasho oo soo kordha kaas oo xoojiya doodaha istiraatijiyadeed ee la ogeysiiyay ee kooxdeena iyo dhammaan shurakadayada si loo qiimeeyo waxa aan baraneyno oo aan ka dhigno istiraatiijiyado lagama maarmaanka u ah istiraatiijiyad ku salaysan.
Ugu dambeyntii, waxaan aqoonsanahay in inta tabarucaaddu ay bixin karto taageero dhaqaale, waa dawlad, ganacsiyo, faa'iido darro, ururrada bulshada, iyo shakhsiyaadka sameeya shaqada dhabta ah ee ku-meel-gaadhka tamarta. Waxaanu u mahad celineynaa hoggaanka cimilada ee gobollada Minnesota iyo Upper Midwest, oo hoggaaminaya gobolkaan dhul beereed ah oo loogu talagalay miraha taageerada deeqaha. Wadajir, waxaan ogahay in aan sidaan sameyn karno.
Xoojinta Kaqeybgalka Dimuqraadiga ah Muujinta Deeqaha Saddex-meelood ee McKnight